Ny Kianja Cantoney faha-127
Faritra fampirantiana an-tserasera 50 misy serivisy 24 ora, efitrano fampitana fampirantiana manokana 10 × 24, faritra fanadinana feno e-commerce iraisana andrefan'ny sisin-tany ary 6 rohy eo amin'ny sisin-tany e-commerce dia natomboka tamina tsimokaretina… Ny Doka faha-127 natsangana tamin'ny faha-15. , Jona, manamarika ny fiandohan'ny ...
Ny fair import and export dia fantatra koa amin'ny hoe Canton fair.Founded tamin'ny lohataona 1957 ary natao tany guangzhou tamin'ny lohataona sy ny fararano isan-taona, dia hetsika ara-barotra iraisam-pirenena feno sy ny tantara lava indrindra, ny avo indrindra, ny lehibe indrindra. maridrefy, ny saka indrindra entana ...
Hatramin'ny fiandohan'ny taona 2020, dia niseho teto an-toerana ny valanaretina pnemonia virus Corona. Ity areti-mifindra ity dia mihanaka haingana, be dia be, ary fahavoazana lehibe.ZAVA ny Shinoa mijanona ao an-trano ary aza avela hivoaka any ivelany.Manao manao ny asantsika ihany koa ao an-trano mandritra ny iray volana. Mba hiantohana ny fiarovana sy ny valanaretina ...
Ho fanamafisana ny fahaizan'ny orinasa sy ny haavon'ny ekipa iraisam-pirenena, manitatra ny hevitra momba ny asa, hanatsarana ny fomba fiasa ary manangana ny fahombiazan'ny asa, ary koa manamafy orina ny fananganana kolontsaina orinasa, mampivoatra ny serasera ao anatin'ny ekipa sy ny fiaraha-miasa, ny Tale Jeneraly — Ammy no nitarika ny Intern. ..